Vaovao Avy Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Janoary 2018 6:46 GMT
1 Teny malaza tamin'ny taona 2005: Satria antomotra ny fiafaran'ny taona 2005, namoaka ny teny mafana indrindra tao amin'ny aterineto Shinoa (ZH) ny Baidu, milina fikarohana lehibe indrindra amin'ny teny Shinoa; toy izao ireo folo voalohany: Mp3″ (“nanome tolotra fitrohana sy fikarohana mp3 mampiadihevitra ny Baidu), “Super Girls“, “Angano”(hiram-pitiavana Shinoa malaza), QQ (rindrambaiko momba ny hafatra antserasera) LiYuchun (Mpandresy tamin'ny Super Girls). “Mitandro ny fandrosoana”, teny iray noforonin'ny Antoko Komonista ao Shina mba hanombohana hetsika eo anivon'ireo mpikambana ao aminy. Xiaoqiang ao amin'ny China Digital Times nanazava ny dikan'io teny io sy ny antony maha-be mpitia azy. Araka ny filazan'i Fangxingdong, tale jeneraly mpanorina ny Bokee.com, ity bilaogy ity no be mpitsidika indrindra ao amin'ny Bokee, izay manome “fitaovana fanadihadiana ny fampandrosoana” takian'ny mpitarika ny antoko. Keso, bilaogeran'ny Teknolojia Vaovao indray naneso tamin'ity (amin'ny teny ZH) fa “hametraka tantaran tsangana ho hita amin'ny vanim-potoana misy antsika izany”.
2 Fihetsiketsehana Shanwei: Tao Shanwei, tanàna mpanjono akaikin'i Hong Kong, notifirin'ny polisy ireo mponina nanao hetsi-panoherana goavana noho ny fifanolanana amin'ny governemanta eo an-toerana momba ny fananan-tany. Howard French avy amin'ny NYT manana lahatsoratra mampahatsiahy fa sambany ny tafika miaramila namely ny sivily hatramin'ny taona 1989. Xinhua, masoivohom-baovao ofisialy kosa nanambara fa “ireo mponina notarihana no nanafika ny orinasan'ny herinaratra tao Guangdong” (Nofafana noho ny antony tsy fantatra ny lahatsoratra tany am-piandohana, ato ny Google Cache). Ato sy ato misy sary vitsivitsy.
3 Fihetsiketsehana fanoherana ny OMC tao HongKong: Notontosaina tao HongKong ny fihaonamben'ny OMC (Fikambanana Manerantanin'ny Varotra) : Manohitra ny varotra tsy ara-drariny sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ary koa ny toekarena ao an-toerana, indrindra indrindra ny indostirian'ny fambolena ireo mponina sy olo-malaza manohitra ny fanatontoloana. Nanangana sokajy bilaogy i Simon World, manamarika ireo tantara sy rohy mana-danja isan'andro. Nanao ny tatitra maha-olom-pirenena ihany koa i Inertia (amin'ny teny ZH) momba ny fihaonambe. Nanolotra ny tag “2005hkwto” mba hanangonana sary sy lahatsoratra ao amin'ny aterineto izy. Misy ihany koa ny vondrona Flickr natsangana.
4 English Douban: namoaka ny endriny amin'ny teny Anglisy. (Fanadihadian’ny Douban momba an'i Shina Web2.0) ny Douban, tranonkala tambajotra sosialy mifototra amin'ny fampahafantarana sy fanadihadiana boky. Nahasarika olona 10 tapitrisa, indrindra ny bilaogera mba hitady boky, sy hizara fomba fijery sy fampahafantarana ny endriny amin'ny teny Shinoa. Manana fanehoan-kevitra i Sinosplice rehefa avy nanandrana ny tolotra.
5 Loka Bilaogera: Navoakan'i Sina ny loka ho an'ny Bilaogera Mendrika Indrindra ao amin'ny Sina Blog (amin'ny teny ZH). Amin'ny maha-mpitarika eo amin'ny tolotra vavahadin-tserasera Shinoa sy tranonkala lehibe indrindra azy, namoaka ny tolotrany mampiantrano bilaogy i Sina tamin'ny faramparan'ity taona 2005 ity ao anatin'ny fanantenana hahatratra ny firoboroboan'ny bilaogy taona 2005. Na izany aza, misy ny tsaho momba izany fa nanasa olona malaza maro be mba hanoratra bilaogy i Sina mba hisarihana mpiserasera.